Guddiga doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo la magacaabay -News and information about Somalia
Home Warkii Guddiga doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo la magacaabay
Guddiga doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo la magacaabay
Kadib markii Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland xilkii ay ka qaadeen Gudoomiyihii Baarlamaanka Maamulkaasi, ayaa waxaa la magacaabay Guddiga doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulkaasi.
Guddoomiye ku xigeenka ahna ku simaha Guddoomiyaha Baarlamanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo qaban-qaabin doona doorashada guddoomiyaha golaha Wakiilada Puntland.
Gudoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka Puntlamd ayaa sheegay 14ka Bishan oo ku beegan maalinta Khamiista inay dhici doonto doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Guddigan ayaa ka shaqeyn doono hawlaha kala duwan ee doorashada & Shuruudaha laga doonaayo qofka isku soo sharaxaya xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland C/xakiin ayaanan wali si toos ah uga hadlin xil ka qaadista lagu sameeyay.
Previous articleXaalad Cabsi Ah Oo Soo Wajahday Wariyaasha Muqdisho
Next articleXOG: Sheekh Shaakir oo si qarsoodi ah loo keenay Muqdisho lana dajiyay Villa Soomaaliya
DHAGEYSO: C/rashiid Xiddig Oo Sirtii Uu Qarsanayey Axmed Madoobe Banaanka Keenay
SAWIRRO: Taliyaha Daraawiishta Puntland oo tagay deegaan ay diriru ku dhexmartay...